Ungawasusa kanjani amagciwane ku-Mac yakho | Amagajethi Ezindaba
Ungawasusa kanjani amagciwane ku-Mac yakho
Izindaba zamagajethi | 24/03/2022 12:40 | Apple
Njenganoma yiluphi uhlelo lwekhompiyutha, i Uhlelo lokusebenza lwe-Apple lunobuthakathaka balo. Lawa asetshenziswa amagciwane ukuze afinyelele ikhompuyutha futhi abe nolwazi oluyimfihlo, njengamakhadi esikweletu noma imininingwane yasebhange. Ezimweni eziningi, umsebenzisi akazi ngisho noku ubukhona begciwane, njengoba indlela yayo yokwenza ithule futhi inezinambuzane.
Uma lokhu kuyindaba yakho, sikuphathele izindaba ezinhle: kunezindlela ezimbalwa zokuvikela i-Mac yakho.Indlela eyaziwa kakhulu ukufaka i-antivirus ethile, nakuba kukhona izindlela eziningi zokususa igciwane ku-Mac ngaphandle kwesidingo sokwazi ngokujulile ukuthi ikhodi yayo yangaphakathi isebenza kanjani.
1 Liyini igciwane futhi kungani libaluleke kangaka?
2 Ungawasusa kanjani amagciwane ku-Mac?
2.1 ukunaka izimpawu
2.2 Susa isofthiwe efakiwe
2.3 Ukufakwa kwesofthiwe yokuvikela
Liyini igciwane futhi kungani libaluleke kangaka?
Baziwa ngokuthi amagciwane ekhompyutha ezinhlelweni ezifihla izenzo zokukhwabanisa, ezinjengokweba umazisi noma ukudluliselwa kwebhange. Ngakho-ke, ama-virus ayisofthiwe ukufakwa kwayo kucabangela, ngaphandle kokuthi umsebenzisi akwazi, ukufinyelela kwabantu abangagunyaziwe kulwazi oluqukethwe ku-PC.
Nakuba sivame ukubhekisela kuzo ngokushintshana, empeleni kukhona amagciwane amaningi ahlukayo kuwo modus operandi. Kuzo zonke, ifayela le- malware asetshenziswa kakhulu abaduni noma izigebengu ze-inthanethi. Ezinye zezinhlelo ezingayilungele ikhompuyutha ezisetshenziswa kakhulu ukuhlasela ama-Mac amaTrojans, i-ransomware, ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi noma i-adware. Ngayinye yazo isebenza ngendlela ehlukile futhi ifinyelela idatha ngezindlela ezihlukene.
Ungawasusa kanjani amagciwane ku-Mac?
Amagciwane amaningi athola ukufinyelela ohlelweni ngokufaka isofthiwe ethile. Nokho, zikhona ezinye izindlela izigebengu ze-inthanethi ezizisebenzisayo ukuze zingene ohlelweni; imilayezo, ama-imeyili, ukwenza kabi... Kunoma yikuphi, ukufinyelela kuhlelo olungayilungele ikhompuyutha kungaqedwa uma sinamathuluzi adingekayo.
Ukunaka Los izimpawu
Ezimweni eziningi, igciwane lihlala lingabonakali futhi libonakala lingasebenzi isikhathi esithile. Kulesi sigaba, izigebengu ze-inthanethi qoqa ulwazi oluyimfihlo bese uzama ukufinyelela kwamanye amadivaysi ukuze uqhubeke nemisebenzi yokukhwabanisa. Ngalesi sizathu, abantu abaningi abazi ukuthi ama-Macs abo angenwe yileli gciwane kuze kube sekuhlwile.
Ezinye ze izimpawu ezingavezwa yi-Mac ethelelekile yilezi: ukulahleka kokusebenza, ukufakwa kwezinhlelo zokusebenza ezintsha ngokuzenzakalelayo, ukunensa, izinkinga zokulondoloza, ukuthunyelwa kwama-imeyili ngobuningi nemiyalezo kwabajwayelene nabo... Ngokuvamile, noma yikuphi ukuziphatha okungajwayelekile kufanele kusenze sisole ukuba khona kwento yangaphandle.
Susa el isoftware efakiwe
Uma isofthiwe enobungozi ifakiwe futhi itholakala ohlelweni, i-Apple iyancoma ukususwa kohlelo bese uyithumela kudoti. Le nqubo ingenziwa ngu Iziyalezo zika-apula.
Ukufakwa de isofthiwe yokuvikela
Ngenxa yokuvela kwezinsongo ku-Mac, kunezinkampani eziningi ezinikezela umsebenzi wazo kuzo Ukuthuthukiswa nokuvikelwa kwesistimu ye-Mac. Lawa ma-softwares avikela i-Mac futhi ahlanze futhi asuse izinhlelo abona sengathi ziyasolisa. Ngendlela efanayo, baxwayisa ngokufinyelela amakhasi ewebhu imvelaphi yawo abangayiboni njengathembekile, kanye nezinhlelo zokusebenza ezingenakho ukuvikeleka okudingekile kwe-Mac.
Ngaphandle kwalokhu, olunye uhlelo olungayilungele ikhompuyutha luthatha ukubonakala kwesofthiwe yezokuphepha. Ngakho-ke, kuhle ukuya ezinhlelweni ezaziwayo ezinomlando wengoma.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Apple » Ungawasusa kanjani amagciwane ku-Mac yakho
I-ILIFE A11, enye indlela enezici eziningi kanye nenani elihle [Buyekeza]